पश्चिमका लागि मसला बन्दै एभरग्रान्डी संकट: ऋण काढेर घ्यू खानेलाई कस्न चीनको आफ्नै दाउ !
एउटा कम्पनी टाट पल्टिन लाग्दा विश्वभर चासो
चीनको घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी एभरग्रान्डीले अत्यधिक ऋण काढेर टाट पल्टिने स्थितिमा जान लागेपछि त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई अर्को मन्दीको युगमा लग्ने भनी पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा गरिएको छ ।
पश्चिमी विश्लेषकहरूले यसलाई सन् २००८ को लेहम्यान ब्रदर्श काण्डसँग तुलना गरेका छन् । त्यतिखेर अमेरिकाको घरजग्गा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी लेहम्यान ब्रदर्श नामक बैंक (जुन त्यतिखेर अमेरिकाको पाँचौं विशाल बैंक थियो) ले सुझबुझ नअपनाइकन अत्यधिक मात्रामा ऋण प्रवाह गरेको थियो ।
त्यो ऋण असुली गर्न बैंक असमर्थ भएपछि टाट पल्टेको (ब्यांकरप्ट) घोषणा गर्‍यो अनि त्यसले गर्दा अमेरिकाको र सँगसँगै विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो । एभरग्रान्डी पनि दिवालिया हुन लागेकाले विश्लेषकहरूले यसलाई लेहम्यान ब्रदर्शसँग तुलना गरेका हुन् ।
के हो एभरग्रान्डी ?
चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत भाग घरजग्गा व्यवसाय तथा त्यससँग जोडिएका उद्योगहरूले ओगटेका छन् । उक्त क्षेत्रमा एभरग्रान्डी सबभन्दा ठूलो खेलाडी थियो । कुनै समयमा यो कम्पनी फोर्चुन ५०० मा सूचीबद्ध थियो अर्थात् कमाइको हिसाबले संसारको सबभन्दा ठूलो कम्पनीमध्ये एक बनेको थियो । यसमा विदेशी कम्पनीहरूले पनि लगानी गरेका छन् ।
शनचन शहरमा रहेको यस कम्पनीले लगभग दुई लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक वर्ष लगभग ४० लाख रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
चीनका २८० शहरहरूमा १३ सयभन्दा बढी परियोजनाहरू यसले सञ्चालन गर्ने गरेको छ । घरजग्गा व्यवसाय बाहेक यसले विद्युतीय सवारीसाधन, खेलकुद तथा थिम पार्कहरूमा समेत लगानी गर्ने गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि यसको पहुँच छ ।
आफ्नो दक्षताको दायरामा नबसेर नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रममा हालैका वर्षमा यसले विभिन्न ठाउँबाट व्यापक मात्रामा ऋण काढ्ने गरेको थियो । उसको बक्यौता दायित्व (लायबिलिटी) नै ३०० अर्ब डलरभन्दा बढी भएकेको बताइन्छ ।
ऋण तिर्न एभरग्रान्डीलाई धौधौ परेपछि केही साताअघि कम्पनीका शेयरधनी तथा लगानीकर्ताहरूलाई उसले नगद प्रवाहको समस्याका विषयमा चेतावनी दिएको थियो । हुन पनि अत्यधिक ऋण काढेर कम्पनी चलाउँदा तरलताको समस्या अवश्यम्भावी हुन्छ ।
थप पैसा उठाउन नसकेमा आफूले डिफल्ट गर्ने उसले बताएको थियो र त्यसले वित्तीय संकट आउन सक्ने भनी सचेत गराएको थियो । त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले आफ्नो अधिकार परित्याग गरेका थिए र १३ अर्ब डलर ऋण चुक्ता गर्न सकिएको थियो । तर अझै पनि धेरै ऋण चुकाउन बाँकी नै रहेको अवस्था छ ।
अहिले चीनमा नियामक संस्थाहरूले ऋण प्रवाहको सीमा तोकेर त्यसमा निकै कडीकडाउ गरिरहेका छन् । अनि कम्पनीको नगदप्रवाह कति छ र मौज्दात नगद कति छ भन्ने कुराको आधारमा उक्त कम्पनीले कति ऋण लिन पाउँछ भन्ने कुरालाई पनि नियामकहरूले निर्धारित गरेका छन् ।
वित्तीय जोखिमको उचित व्यवस्थापनका लागि यस्तो नियम लगाइएको हो । त्यसले गर्दा एभरग्रान्डीले आफ्ना ऋणदाता, आपूर्तिकर्ता र लगानीकर्ताहरूको रकम चुक्ता गर्नका लागि फन्ड जुटाउन सकिरहेको छैन ।
त्यसमाथि जोखिममा परेको कारण एभरग्रान्डीले आफ्नो सम्पत्ति (एसेट) पनि बेच्न पाइरहेको छैन । उसलाई एड्भान्स पेमेन्ट दिइसकेका कम्पनीहरूले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । यसले गर्दा एभरग्रान्डीको तरलताको स्थिति संकटमा परेको छ ।
यस संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि कम्पनीले चीन सरकारबाट उद्धार (बेलआउट) को आशा गरेको भए पनि सरकारले त्यसो नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले ऋण पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र अन्ततोगत्वा टाट पल्टेको घोषणा गर्नुपर्ने सरकारको आशय छ ।
एभरग्रान्डी टाट पल्टेको घोषणा गरिएमा सामाजिक स्थिरता कायम गराउन आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, घर खरिदकर्ता लगायतलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले पहल गर्नेछ । चिनियाँ बैंक र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई त्यसपछि क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
कम्पनीलाई दिवालिया घोषणा गर्नुअगाडि उद्धार नगर्ने चीन सरकारको सुनियोजित नीति हो । दीर्घकालीन नभई अल्पकालीन वृद्धिका लागि थाम्न नसकिने गरी ऋण लिने कामलाई चीन सरकारले रोक्न खोजिरहेको छ । ऋण काढेर घ्यू खान पल्केका चिनियाँ कम्पनीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने स्थिति ल्याउन लागेपछि त्यसलाई रोक्न चीन सरकार सक्रिय बनेको हो ।
सी चिनपिङ राष्ट्रपति बनेदेखि अत्यधिक ऋणप्रवाहलाई रोक्ने अनि ठिक्कको आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने नीति अपनाइरहेका छन् । यही आर्थिक रणनीतिका कारण सीको शासनकालमा चीनको वार्षिक वृद्धिदर लगभग १० प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । पश्चिमाहरूले चीनको अर्थतन्त्र सुस्त भयो भन्दै काखी बजाइरहेका छन् तर यो चीन सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिको एक कदम हो ।
अत्यधिक वृद्धिदर कायम रहँदा त्यसले विभिन्न जोखिम निम्त्याउँछ र त्यो दिगो पनि रहँदैन । व्यवस्थापन गर्न सकिने हदको मध्यमस्तरीय आर्थिक वृद्धिमार्फत थप सिर्जनशील र सुसंगठित अर्थतन्त्र निर्माण हुने सीको धारणा छ ।
त्यसैले ऋण काढेर विभिन्न क्षेत्रमा हात हाल्ने एभरग्रान्डी जस्ता कम्पनीलाई टाट पल्टिन दिएर राष्ट्रपति सीले सरकार कम्पनीको उद्धारमा नलाग्ने, कम्पनी आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् । ऋणमा आधारित द्रुत विकासलाई नै आधार मानेर विभिन्न विश्लेषकहरूले चीनको पतनको भविष्यवाणी गर्ने गरेका छन् तर चीनको दूरदृष्टियुक्त नेतृत्वले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन समुचित कदम चालिरहेको छ ।
यो अमेरिकाको भन्दा फरक दृष्टिकोण हो । लेहम्यान ब्रदर्शले ल्याएको आर्थिक संकटपछि अमेरिकी सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उद्धार गरेको थियो भने सर्वसाधारणलाई चाहिँ अलपत्र छोडिदिएको थियो ।
त्यसबाट जन्मेको असन्तुष्टिका कारण अकुपाई वाल स्ट्रीट जस्तो अभियानको जन्म भएको थियो भलै त्यसले अमेरिकाको गतिछाडा पूँजीवादलाई लगाम कस्ने बृहत् आन्दोलनको रूप लिन सकेन । तर सन् २००८ को आर्थिक मन्दीका कारण पश्चिमको क्षयीकरणको बाटो चाहिँ खनियो अनि डोनल्ड ट्रम्प जस्ता लोकरञ्जनवादीहरूको उदयमा पनि योगदान गरिदियो ।
चीनले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको त्यस कारकतत्त्वको गहिरो अध्ययन गरेकाले त्यो पासोमा आफू नफस्ने रणनीति बनाइसकेको छ । अमेरिकाले घरजग्गा कारोबारको अत्यधिक वृद्धिका कारण आएको बबललाई व्यवस्थापन नगरी छाडा छोडेकाले आर्थिक संकटको बाटो खनिएको थियो । अनि अमेरिकी डलर संसारको कारोबार मुद्रा भएकाले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको संकटले अन्यत्र पनि संकट पारेको थियो ।
तर चीनले विश्वमा आर्थिक संकट आउन नदिनका लागि एभरग्रान्डीलाई टाट पल्टिन दिए पनि त्यसका लगानीकर्ता र त्यसलाई ऋण दिनेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेछ भनी माथि पनि उल्लेख गरिएको छ । विश्वका सबै समस्या बेइजिङले नै गराइरहेको हो भन्ने किसिमको भाष्य पश्चिमले निर्माण गरिरहेको स्थितिमा चीनले विश्वव्यापी आर्थिक संकटको कारक आफू नबन्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।
र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ऋण काढेर आर्थिक वृद्धि गराउन खोज्ने जोखिमयुक्त अर्थतन्त्रको मोडलमा आमूल परिवर्तन गराउने चीनको योजना हो । त्यसैले चीनको पतनको कामना गर्ने परपीडक पश्चिमाहरूले एभरग्रान्डी संकटलाई अमेरिकाको लेहम्यान ब्रदर्शसँग तुलना गरेको भए पनि त्यो आधारहीन देखिन्छ ।
यो सामग्री तयार पार्न एसिया टाइम्स, आरटी, एक्सियोस, सीटीभी न्युज, द फ्री प्रेस जर्नल, ब्लूमबर्ग लगायतमा प्रकाशित समाचार तथा विश्लेषणको सहायता लिइएको हो ।